आइसियु : कागजमा छ, अस्पतालमा छैन! – Health Post Nepal
२०७७ कार्तिक १४ गते १०:२०
अघिल्लो साता अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान गाउँपालिका–९ का ७३ वर्षीय कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो । बुटवलबाट दाङको बेलझुन्डी अस्पताल लैजाँदै गर्दा ति संक्रमितको बाटोमै मृत्यु भएको हो।
प्रदेश सरकारद्धारा व्यवस्थापन गरिएकोे बुटवलस्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड अभाव भएपछि उनलाई दाङ लगिदै थियो। बुटवल कोरोना अस्पतालमा नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-४ का ७७ वर्षीय एक पुरुषको आइसियु बेडमा उपचार नपाउँदा मृत्यु भयो।
उनी पनि आइसियु बेड अभावमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा थिए। उनलाई प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनबाट कोरोना बिशेष अस्पतालको आइसियुमा लगिँदै गर्दा मृत्यु भएको थियो। कोरोना अस्पतालमा आइसियु खाली नहुँदा उनी दुई दिनदेखि आइसियु पर्खिँदै थिए।
यि दुई कोरोना संक्रमितहरु आइसियुसहितको उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्नुपरेका उदाहरण मात्रै हुन्। यो अवस्था सर्वसाधारणका लागि मात्रै नभई स्थानीय सरकारकै कर्मचारीले पनि आइसियु बेड नपाउने अवस्था छ।
गत साता बुटवल उपमहानगरका एक कर्मचारीको आइसियु बेड नपाएर मृत्यु भयो। त्यसपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई जनस्वास्थ्यमा थप संवेदनशील बन्न आग्रह गरिसकेको छ।
उपमहानगरका कर्मचारी नायब सुब्बा नारायण ज्ञवालीको आइसियु बेड अभावका कारण मृत्यु भएपछि उसले कम्तीमा २५ आइसियु बेड थप्न भनेको हो।
उपमहानगरको कार्यपालिकाको ८६ औं बैठक बसेर उक्त निर्णय गर्दै त्यसका लागि उपमहानगर समन्वय गर्न र जुनसुकै भवन पनि उपलब्ध तयार रहेकाे बताएको छ ।
रुपन्देहीको बुटवल र भैरहवामा कोरोना संक्रमितले अस्पतालमा बेड पाउन छाडेको धेरै दिन मात्र होइन महिनौ भइसकेको छ। लक्षणसहितका बिरामी बढ्दै गएपछि आइसियु बेड अभाव हुँदै गएको अस्पतालका चिकित्सक बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पतालको बेड क्षमता बढाउने भने पनि बुटवल र भैरहवाको अस्पतालको क्षमता बृद्धि हुन सकेको छैन्। यसले जनताको ज्यान जोखिमा परेको छ।
प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयकाअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या १७ हजार ९ सय २२ जना पुगेको छ। त्यसमध्ये ४ हजार ८ सय ८५जना सक्रिय संक्रमित छन्।
प्रदेशमा १६९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका चारवटा कोरोना विशेष अस्पतालमा अहिलेसम्म १९७ बेड छन्। ति अस्पतालमा आइसियु बेडको संख्या ३४ छ भने मनिटरका ३३ बेड छन्।
ति सबै अस्पतालमा १३ वटा भेन्टिलेटर छन्। प्रदेशभित्र अहिले पनि २९० जना लक्षणसहितका कोरोनाका बिरामी छन्। त्यसमध्ये ४ जना आइसोलसनमा, २२४ जना आइसोलेसन अस्पतालमा र ६२ जना होम आइसोलेसनमा छन्।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ वटा जिल्लामा जम्मा ७ वटा भेन्टिलेटर थपेको छ। रुपन्देहीका दुई तथा बाँके र दाङका एकएक गरी ४ वटा अस्पतालमा ३४ बेडको आइसियू सञ्चालन गरिएको छ।
लक्षणसहितका तथा गम्भीर अवस्थाका संक्रमित थपिँदै गर्दा आइसोलेसनसँगै आइसियू र भेन्टिलेटर अभाव भइरहेको छ। तर, प्रदेश सरकारले आइसियू र भेन्टिलेटर थप गर्ने तर्फ कुनै तयारी गरेको छैन।
गत चैत १० गते बसेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जका ४ वटा अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियूसहितको आइसोलेसन तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बजेट बिनियोजन भए पनि लकडाउनलाई कारण देखाउँदै भेन्टिलेटर खरिद गरिएको छैन । गम्भिर अवस्थाका कोरोना संक्रमित थपिँदै जाँदा समेत आइसियू र भेन्टिलेटर खरिद गर्नेतर्फ अस्पताल र सरकारले कामको गति बढाएको छैन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले बुटवलमा रहेको कोरोना बिशेष अस्पतालको क्षमता बढाउनका लागि बजेट पठाइसकेको जानकारी दिए ।
उनले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई २ करोड १८ लाख बजेट असोजको १५ गतेतिर निकासा दिइएको र काम पनि शुरु भइरहेको बताए।बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा ३० बेडको हाइ डिपेडेनसी यूनिट र ५० बेडको अक्सिजन पाइपलाइनयुक्त आइसोलेसन बेड बनाइँदैछ।
निजी अस्पतालहरुको उपचार खर्चको विषयमा केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष हेरेको हुँदा त्यस विषयमा बिरामीको रेकर्डको अवस्था मात्रै आफूहरुलाई जानकारी हुने डा. पौडेलले जनाए। तर, बिरामीलाई बेड उपलब्ध गराउनका लागि भने प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.पुष्पराज पौडेलले कोरोना संक्रमणपछि सरकारले चारवटा अस्पतालमा १२ वटा भेन्टिलेटरसहित ३४ बेडको आइसियू संचालन गरेको बताए।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका ५ बेट भेन्टिलेटरमध्ये ४ वटा मात्रै प्रयोगमा छन्। जनशक्ति नहुँदा एक भेन्टिलेटर सञ्चालन हुन सकेको छैन्। भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा पनि एउटा भेन्टिलेटरसहित ५ बेडको आइसियू र २२ बेडको आइसोलेसन मात्रै सञ्चालनमा छ।
बुटवलको कोरोना अस्पतालमा साविक लुम्बिनी अञ्चलका ६ जिल्लाको साथै प्यूठान र पूर्वी नवलपरासीका गम्भीर संक्रमित उपचारको लागि आउने रुपन्देहीमा प्रदेश सरकारले एउटा मात्रै भेन्टिलेटर उपलब्ध गराएको छ।
यसले बिरामीले उपचार पाउन सकिरहेका त छैनन् नै उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पनि बिरामी उपचारको व्यवस्थापनमा सकस पर्ने गरेको छ।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १२ वटा जिल्लामा जम्मा ७ वटा भेन्टिलेटर थपेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा गम्भीर अवस्थाका संक्रमितको चाप बढ्दै गए पनि प्रदेशका अस्पतालमा पूर्वाधार र उपकरण थपिएका छैनन्। रुपन्देहीमा भेन्टिलेटर अभाव भएपछि बाहिरका जिल्लामा लैजाँदै गर्दा संक्रमितहरुको बाटोमै मृत्यु हुने गरेको छ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. बिष्णु गौतमकाअनुसार बुटवलमा बनाइएको आइसियूमा हालसम्म करिब २ सय ८ जना कोरोना संक्रमितले उपचार सेवा लिइसकेका छन्।
तीमध्ये १५ जना अहिले पनि उपचाररत छन् भने ५९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै २६ भन्दा बढीको भेन्टिलेटरमा उपचार गरिएको छ। तीमध्ये पनि दुईजना निको भएर घर फर्किएको गौतमले जानकारी दिए।
बाँकेमा रहेका आइसोलेसनले कोरोना संक्रमितको संख्या थेग्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका आइसोलेसन भरिभराउको अवस्था छ।
ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिँदै जाने हो भने थेग्न मुस्किल पर्ने निश्चित छ। अझ कोरोना संक्रमण पछि जटिल बिरामीको उपचारका लागि पश्चिमका जिल्लाबाट रेफर गरेर बिरामी पठाइने भएकाले यहाँ आइसोलेसन बेड तत्काल थप्नुपर्ने देखिन्छ।
आईसियु, मोनिटर र भेन्टिलेटर समेत थप्न चासो नदिने हो भने अवस्था भयावह हुने निश्चित छ। बाँकेमा कोरोना संक्रमित भएर उपचारत २३ जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिएको छ ।
जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका अनुसार जिल्लामा उपचाररत कोरोना संक्रमित २३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेकोछ।जिल्लामा गम्भीर अवस्थामा रहेका कोरोना संक्रमितको भेरी अस्पताल नेपालगन्ज र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचार भइरहेको छ।
केन्द्रका अनुसार भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा उपचाररत १६ जना र नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत ७ सहित २३ जना कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था गम्भीर रहेको बाँकेका कोरोना फोकल पर्शन नरेशबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार जिल्लामा गम्भीर बिरामीमध्ये एकजनाको भेन्टिलेटरमा र २२ जनाको आइसियुमा राखेर उपचार भईरहेको छ। भेरी अस्पतालको आइसोलेसनमा ५२ जना र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको आइसोलेसनमा ३४ गरी ८६ जना कोरोना बिरामीको हाल उपचार भईरहेको छ ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बागंले तत्काललाई बाँकेमा थप ७५ बेडको आवश्यक रहेको बताए। उनले त्यसका लागि सहयोगको अपील गरेका छन् भने सहयोग जुट्ने क्रममा रहेको बताए।
प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारको लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि पर्याप्त आइसियू र भेन्टिलेटर नहुँदा गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितलाई आइसोलेसनमै उपचार गर्न बाध्य भएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।
बुटवल कोरोना अस्पतालका फोकल पर्सन डा. सुदर्शन थापाले थप आइसोलेसनका लागि पनि स्रोत साधनको अभाव भइरहेको बताए। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. बिष्णु गौतमले अस्पतालमा बिरामीको चाप भएको बताए।
दाङको कोरोना विशेष अस्पताल बेलझुण्डीमा ५६ आइसोलेसन बेड, २४ मोनिटर र ५ आइसियु बेड छन्। अहिले आइसियुमा २ जना र आइसोलेसन बेडमा ८ जना उपचाररत रहेको अस्पतालको व्यवस्थापक द्रोण वलीले जानकारी दिए।
एक जना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनबाट धागो कारखानामा रहेको आइसियुमा खाली भएपछि सार्ने क्रममा भने अर्को बुटवलबाट दाङको कोरोना अस्पतालमा लैजादै गर्दा।
निजी अस्पतालमा बेड छन्, बिरामी छैनन्
लुम्बिनी प्रदेश भित्रका निजी अस्पतालको भौतिक अवस्था देखाइए पनि बेड संख्याका आधारमा बिरामीको संख्या भने देखिँदैन। नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा ४२ जना आइसोलेसनमा, १६ जना आइसियुमा र एक जना भेन्टिलेटरमा छन्।
युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवामा आइसोलेसनमा १२ र आइसियुमा ७ जना, देवदह मेडिकल कलेज, रुपन्देहीकाे आइसोलेसनमा ९ जना, क्रिमसन अस्पताल, रुपन्देहीकाे आइसोलेसनमा २ जना, युनाइटेड अस्पताल, पाल्पाकाे आइसोलेसनमा ३ जना र लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पाकाे आइसोलेसनमा २१ गरी ८९ जना छन्।
त्यसैगरी ति निजी ६ अस्पतालमा आइसियुमा २३ जना र भेन्टिलेटरमा १ जना बिरामी उपचाररत छन्। जबकी ति अस्पतालमा ४०३ वटा आइसोलेसन बेड, ४६ वटा आइसियु बेड, ४६ वटा मोनिटर बेड र ११ वटा भेन्टिलेटरको क्षमता देखाइएको छ।
अर्कोतिर कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा जिल्लाभित्रै सञ्चालित सरकारी र निजी अस्पतालबीच समन्वय नभएको पाइएको छ। रुपन्देहीकै निजी अस्पतालमा आइसियु बेड अभाव रहँदा पनि रुपन्देहीकै सरकारी अस्पतालबाट बिरामी पठाउने गरिएको छैन्।
गत हप्ता बुटवलका दुइ अस्पतालमा आइसियु बेड नपाएर दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो। एक जना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनबाट धागो कारखानामा रहेको आइसियुमा खाली भएपछि सार्ने क्रममा भने अर्को बुटवलबाट दाङको कोरोना अस्पतालमा लैजाँदै गर्दा।
तर, बुटवलबाट भैरहवामा रहेको यूनिभर्सल मेडिकल कलेजको अस्पतालमा १० बेडको आइसियु क्षमता रहेकोमा ७ जना मात्रै आइसियुमा उपचारत रहेको देखिन्थ्यो।
मन्त्री संयोजक भएकै अस्पतालको हाल बेहाल
प्रदेशका चार ठाउँमा प्रदेश सरकारले चार वटा सरकारी अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा विकास गरी कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने योजना बनायो।
ति चार अस्पतालको व्यवस्थापनको लागि चार मन्त्रीलाई तोकेरै संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, पनि ति अस्पतालको क्षमता बृद्धि हुन सकेको छैन।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालको संयोजकको रुपमा उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीलाई, भैरहवाको भीम अस्पतालमा सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराललाई, बाँकेको भेरी अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीलाई तोकिएको छ।
तर, ति अस्पतालकै क्षमता बृद्धि हुन सकेको छैन्। प्रदेश सरकारकै सुरुको योजनालाई हेर्ने हो भने उक्त योजना चार कोरोना अस्पतालमध्ये तीनवटा अस्पतालमा अहिलेसम्म पूरा भएको देखिँदैन।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भीम अस्पताल र भेरी अस्पतालमा लक्ष्यभन्दा अहिलेसम्मको काम कम देखिन्छ भने दाङको बेलझुण्डी कोरोना अस्पतालमा लक्ष्यभन्दा बढी काम भएको देखिन्छ ।
दाङको बेलझुण्डी अस्पतालका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संयोजक तोकिएको छ। तर, दाङको बेलझुण्डीमाभन्दा बाँकेको भेरी अस्पताल, रुपन्देहीको लुम्बिनी र भीम अस्पतालमा बिरामीको चाप बढी छ।